လူမီနီယမ်အလွိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ဗီလာအဘို့ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်.,ကားဂိုဒေါင်နဲ့ Exiterior တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း,ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite ဂိုဒေါင်တံခါးပြုပြင်ခြင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > လူနေအိမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး > လူမီနီယမ်အလွိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး
ပစ္စည်း: လူမီနီယံအလွိုင်း, 2.0mm အထူ
panel က: မျက်နှာပြင်အတုသစ်သားပုံနှိပ်ခြင်း, အကောင်းအဆိုး cons box ကို shaping, လက်ချောင်းကာကွယ်မှုဒီဇိုင်း, panel ကိုအထူ 40 မီလီမီတာ။
အရောင်: အဖြူကြွေ (အဖြူရောင်ကြွေ, ဂန္သစ်သားဆန်စပါး, အတုယူကြေးနီဘောဇဉ်)
ဟာ့ဒ်ဝဲ: ပုံနှိပ်ခြင်း, 2.5 လက်မလမ်းညွှန်, 82B torsion နွေဦး
ကားဂိုဒေါင်တံခါးဆွဲယူ transparent အပိုင်း acrylic အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဗီလာအဘို့ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်. ကားဂိုဒေါင်နဲ့ Exiterior တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း ရိုးထုံးတမ်းစဉ် Hite ဂိုဒေါင်တံခါးပြုပြင်ခြင်း စမတ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်. ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်. overhead တံခါးဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖွင့ ်. စက်ရုံအဘို့ကားဂိုဒေါင်တံခါး ရောင်းရန်ကားဂိုဒေါင်တံခါးများ